Cottage yoMgodi wamalahle - I-Airbnb
Cottage yoMgodi wamalahle
Exline, Iowa, United States
Eli khaya lincinane likhulileyo likwidolophu encinane nethe cwaka. Kwiimitha nje ukusuka endlwini uya kufumana amadlelo, iinkomo kunye nezilwanyana zasendle. Iyadi esecaleni iphangalele kwaye ibandakanya igumbi lemisebenzi yangaphandle.
Umhlali wangaphambili wexesha elide uye wahamba, eshiya indawo ehlala kakuhle ngenxa yolonwabo lwakho.
Lo mhlaba uneendawo zokupaka ezininzi ezithandathu. Indlu ine-flow evulekileyo phakathi kwamagumbi kunye nomnyango wangaphakathi kuphela kwigumbi lokuhlambela. Izithuba zenguqu ziquka ivaranda encinci ngaphambili kunye negumbi elincinci lodaka ngasemva.
Exline ngokwembali, yayiyidolophu yabasebenzi basemgodini wamalahle. Uninzi lwamakhaya kule ndawo ayafana nolu luhlu kwaye ngokwesiko kwakuhlala abasebenzi basemgodini wamalahle kunye neentsapho zabo. Ngokukodwa olu luhlu yayilikhaya losapho lwabasebenzi basemgodini wamalahle, umakazi omkhulu womfazi wam kunye nomalume. Khangela "uMgodi wePony wokuGqibela" ukubona ukuba bekunjani ukumbiwa kule ndawo.
Ndinika iindwendwe zam indawo, kodwa ukuba unemibuzo malunga nendlu okanye indawo ndiyakwenza konke okusemandleni am ukukuhlalisa.